Iimbali ezimbalwa ze-Forex zorhwebo; kuxoxwa kunye nobunzima - Icandelo 2 | FXCC
Education - Amanqaku kunye tutorials - amanqaku asekelwe ngaphambili - Iimbali ezimbalwa ze-Forex zorhwebo; kuxoxwa kunye ne-debunked - Icandelo 2
Umzekelo; bangaphi abaphuma kwi-95% abathi bahluleka ukuba bathengise ngokuthengisa ixesha labo kwizakhono zokuthengisa?
Bangaphi bafumana kuloo ndlela epheleleyo indawo emnandi, lokuba nexesha elaneleyo, unengqondo efanelekileyo, unemali engenayo efunekayo kunye nokulondolozwa, ukuthatha ingqalelo ekucingeni umngcipheko kunye nomvuzo kwaye ukhule ngokwaneleyo ukuhlangabezana nazo zonke iinkcukacha? Ukuba uzinikezele, uqokelelekile kwaye ufune iingcebiso ezingcono kakhulu njl. Ke amathuba akho okuphumelela aya kuvuka.
Isicwangciso esilula sinenzuzo ngakumbi kunokuba idibeneyo
Ukuba isebenza, isebenza. Isizathu sokuba abaninzi abathengi abanolwazi banokukhetha ukulula kuba yingxaki kuba baya kuhlola malunga naso sonke isisombululo sezibonakaliso zobugcisa kunye nezicwangciso, ke baya kuqala inkqubo yokucima iikhati zabo / iifowuni zendlela kunye nendlela, ukugxininisa oko kubenza kubo.
Nangona kunjalo, kusekho abahwebi abaphumelelayo apho, abaza kusebenzisa intsebenziswano eyahlukeneyo: amaxesha, amaxesha ama-fractals, amaFibonacci, amaphuzu e-pivot kunye namanqanaba amakhulu ahambayo ukwenza izigqibo zabo. Ngoku ifundeka njengesicwangciso esiyinkimbinkimbi kodwa ngokuqinisekileyo akukho nto kwaye ekuqale kuhlolwe iitshathi zabo ziya kujonga i-vanilla. Baya kuthi baxakeke nge-osmosis, ngexesha leminyaka yokusebenza, ubuninzi bezakhono ezifihliweyo, ezingabonakaliyo kwiitshathi zabo.
Iinkqubo zokurhweba zinokusebenza nanini na ixesha
Ngokuqinisekileyo abakwaziyo. Inkqubo yokurhweba / indlela esebenzayo yokwenza i-scalping, ayinakuqinisekiswa ukuba isebenze usuku lokuhweba / ukuguqula i-swing, okanye indawo yokuthengisa. Izakhono kunye neendlela ezifunekayo kule ndlela zorhwebo ezihlukeneyo, zihluke ngokupheleleyo. Ukuba uzama ukufumana inzuzo ekuhambeni kwexesha elifutshane, ke akunakwenzeka ukuba usebenze isicwangciso-mqondiso sobuninzi ukuze wenze izigqibo ezicatshulwa kuzo. Unomdla wokubona iphethini eqhubekayo okanye ngeenxa zonke kumanqanaba ombalo wee-pivot kwaye wenze isigqibo esheshayo.
Ukuthengisa ngokuyinhloko kwengqondo
Ukuba neengqondo ezifanelekileyo xa kuthengiswa kubalulekile, nangona kunjalo, iingxoxo / iingxabano ziye zahlasela iminyaka emininzi malunga neyiphi i-3Ms; ingqondo, ukuphathwa kwemali kunye neendlela eziphezulu.
Abathengisi abaninzi banokuba bathi ukuphathwa kwemali / umngcipheko yinto ebaluleke kakhulu ekuthengiseni kwakho, abanye banokubonisa ukuba ngaphandle kwendlela efanelekileyo, indlela yakho yengqondo ayikho nto. Ukuthengiswa akuyona ingqondo yengqondo, inzululwazi yinto ebalulekileyo, kodwa inokugqithiswa ngokupheleleyo xa umntu ekhetha ukusetyenziswa ngokuzenzekelayo ngokuzenzekelayo.